Ajụjụ - Ajụjụ Ndị A Na-ajụkarị
N'okpuru bụ azịza ajụjụ anyị na-ajụkarị. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọta azịza ebe a, biko kpọtụrụ anyị.
Kedu ka m si eji saịtị ahụ?
Mgbe ị gara SoNuker.com, pịa bọtịnụ “Nbanye / Debanye aha” na menu nke isi.
Achọrọ ka ị banye na akaụntụ Google (YouTube) gị. Ozugbo ịbanye na akaụntụ gị, naanị nabata ikikere ngwa ma a ga-eduga gị n'ọdụ ụgbọ otu gị.
Biko mara: anyị anaghị enweta ozi nbanye gị ma ọ bụ nwee ohere ịnweta akaụntụ YouTube gị n'agbanyeghị ihe ọ bụla. Akaụntụ gị nwere ike iji SoNuker.com n'enweghị nsogbu ọ bụla nke SoNuker ma ọ bụ ndị ọzọ na-enweta ohere.
Mgbe ị nọ na ọnụ ụzọ otu, a na-ewetara gị atụmatụ 4 SoNuker, nke gụnyere Basic, Starter (Kacha ewu ewu), Enterprise na Celebrity. Dabere na mkpa gị na ihe ịchọrọ, ị nwere ike kpebie iji atụmatụ Ego efu ma ọ bụ obere ụgwọ ọnwa, gaa na atụmatụ ịkwụ ụgwọ dịka ụlọ ọrụ ma ọ bụ atụmatụ a ma ama.
Kedu nchekwa SoNuker?
SoNuker.com bụ ọrụ dị mma ma nwee ntụkwasị obi site n'aka ndị otu puku, puku puku, nke na-eto site na nkeji! Ihe nzuzo gị na nchedo bụ ebumnuche anyị # 1,000,000, ọ bụ ya mere anyị ji zụpụta nzuzo siri ike ma chekwaa weebụsaịtị na-eji nzuzo 1-bit.
A na-echekwa ozi nbanye akaụntụ m na SoNuker?
OWO! Anyị enwetaghị ozi nbanye gị nke YouTube / Google ma anyị na - echekwa aha ọwa gị, URL ọwa na adreesị ozi-e n'ime nchekwa data gị ka netwọọdụ wee nyefee ndị debanyere aha gị. Ọ dịghị ihe ọzọ!
Ajụjụ Ego efu
Nkọwa nke Atụmatụ (Free Plan)
Mgbe ịpịrị bọtịnụ "Mee ọ rụọ ọrụ", a ga-ebute gị gaa na peeji nke ịchọrọ ịdenye aha na 10 ọwa ndị ọzọ na dịka vidiyo 10. Mgbe ịpịrị bọtịnụ “Mee ọ rụọ ọrụ” bọtịnụ, soro ntuziaka ndị edere na ibe iji mee nke ọma ịdenye aha na ọwa na vidiyo.
Ọ bụrụ n’ịhụta nsogbu ọ bụla ịnwa ịchọrọ na / ma ọ bụ denye aha na ọwa, pịa bọtịnụ “Skip” edo edo iji gosipụta ọwa ọhụrụ. Mgbe itinyere aha gị nke ọma na ọwa 10 ma nwee mmasị na vidiyo 10, atumatu Arịrịọ ga-arụ ọrụ ma ị ga-enweta ndị debanyere aha 5 n'ime oge ọrụ oge 24.
Usoro ohuru a zuru oke ma gha enye ndi nile ndebanye aha ise a nyeghachi n’aka gi tupu akara elekere iri-abuo n’aho tupu imeghari bọtịnụ a, mana buru n’uche na ụfọdụ ndị nwere ike wepu aha gị n’aka, na-eme ka ị nweta ihe dịka 5- 24 ndị ​​debanyere aha n'oge mmemme nke ọ bụla. A machibidoro ndị wepụrụ aha ndị ọrụ ndị ọzọ enwetara site na SoNuker na-akpaghị aka.
Atụmatụ ebumnuche nwere ikike abụọ, nke bụ na enyere gị naanị iji ya otu oge kwa awa iri abụọ na anọ ọ bụla, ị ga-abanye na SoNuker oge ọ bụla iji rụgharịa atụmatụ gị. Nke a pụtara, mgbe ịpịrị bọtịnụ “Mee ọ rụọ ọrụ”, ị gaghị enwe ike pịa bọtịnụ “Mee ọ rụọ ọrụ” ọzọ maka awa 2 ọzọ. Oge elekere iri abụọ na anọ agaala ma kwe ka ị pịa bọtịnụ “Mee ọrụ” ọzọ, ị ga-enweta ọkwa Email na-akpaghị aka iji chetara gị ma ịbanye na ịnweta nke a.
Nkọwa nke Atụmatụ efu (Atụmatụ Starter)
Mgbe ịpịrị bọtịnụ "Mee ọ rụọ ọrụ", a ga-ebute gị gaa na peeji nke ịchọrọ ịdenye aha na 20 ọwa ndị ọzọ na dịka vidiyo 20. Mgbe ịpịrị bọtịnụ “Mee ọ rụọ ọrụ” bọtịnụ, soro ntuziaka ndị edere na ibe iji mee nke ọma ịdenye aha na ọwa na vidiyo.
Ọ bụrụ n’ịhụta nsogbu ọ bụla ịnwa ịchọrọ na / ma ọ bụ denye aha na ọwa, pịa bọtịnụ “Skip” edo edo iji gosipụta ọwa ọhụrụ. Mgbe itinyere aha ọwa 20 na vidiyo iri abụọ gara nke ọma, atụmatụ Starter ga-arụ ọrụ, ị ga-enwetakwa ndị debanyere aha iri azụ n'ime oge awa iri na abụọ.
Usoro ohuru a zuru oke ma gha enye ndi nile ndebanye aha ise a nyeghachi n’aka gi tupu akara elekere iri-abuo n’aho tupu imeghari bọtịnụ a, mana buru n’uche na ụfọdụ ndị nwere ike wepu aha gị n’aka, na-eme ka ị nweta ihe dịka 10- 12 ndị ​​debanyere aha n'oge mmemme nke ọ bụla. A machibidoro ndị wepụrụ aha ndị ọrụ ndị ọzọ enwetara site na SoNuker na-akpaghị aka.
Atụmatụ Starter a nwere ọdịiche abụọ dị na isi na Atụmatụ Atọ. Ọdịiche nke mbụ bụ na ị na-enwe ike ime ka ya rụọ ọrụ ma nata ndị debanyere aha 10 kwa awa 12 kama oge ọ bụla 24. Ọdịiche nke abụọ bụ na kama ịdenye aha na 10 ọwa ndị ọzọ, ịkwesịrị ịdebanye aha na 20. Cribdenye aha na 20 ọwa ndị ọzọ bụ isi ihe kpatara eji enyere atụmatụ a aka ịrụ ọrụ kwa awa 12.
Mgbe ọ masịrị m ma debanye aha na ya, sistemụ enweghị ike igosi na m dechara ya.
Ndụmọdụ mbụ anyị nwere ike ịme bụ ịgbalị ịbanye na akaụntụ ọzọ dị iche karịa nke ị na - eji ihe dị ugbu a ma denye aha na weebụsaịtị anyị. I nwere ikike ịbanye na SoNuker.com site na iji uzo ị choro inata oru ndi a, mana mee ka atumatu di otua ma choo / denye aha site na iji akaụntụ youtube.com iche. Biko nwaa nke mbụ. Ọ bụrụ na nke a anaghị arụ ọrụ, biko gaa n'ihu na-agụ aro ndị ọzọ.
Nke a na-akpatakarị, okwu a na-eme n'ihi na Adreesị IP ị na-ejikọta ya abanyeala na ọwa ọtụtụ n'ụbọchị. Ọnụ ọgụgụ kachasị elu bụ ihe dị ka 75, yabụ ọ bụrụ na ijila weebụsaịtị anyị yana ikekwe websaịtị ọzọ sub4sub niile n'otu ụbọchị, ị erutela oke a.
Ọ bụrụ na iji VPN ma ọ bụ Proxies jikọọ na Internetntanetị, ọ ga-ekwe omume ndị adreesị IP ejirila mee ihe n’ihu ọha erutela oke ahụ.
Solutionzọ kachasị mma anyị nwere ike ịtụwa ozugbo bụ ịnwale ọzọ awa iri abụọ na anọ ka emechaa (ọ bụrụ na ị na-eji ọtụtụ websaịtị sub24sub n'otu ụbọchị), ma ọ bụ tufuo gị na njikọ VPN ma ọ bụ Proxy ma ọ bụrụ na ị na - eji otu.
Ọzọkwa, akaụntụ YouTube nwere ike ịdenye aha karịa 2,000 ọwa. Ọ bụrụ n’itinyelarị ọwa 2,000 ndị ọzọ, yabụ nke a nwere ike bụrụ ihe kpatara na ịnweghị ike ịdebanye aha gị nke ọma. Ihe ga - eme ugbu a bụ ịbanye na weebụsaịtị anyị site na ọwa ịchọrọ ịnabata ndenye aha na mgbe ị na - eme ka atụmatụ tinye, banye na akaụntụ youtube.com dị iche.
Ana m agbalị ịgbalite atụmatụ, mana sistemụ ahụ agaghị ekwe ka m denye aha na ọwa.
Ọ bụrụ na ọ na-esiri gị ike ịdenye ọwa maka ihe ọ bụla, pịa bọtịnụ “Skip” na-acha odo odo iji bute ọwa ọhụrụ. Ozugbo eburula ọwa ọhụụ, ịnwere ike ịnwa denye aha ya na ọ kwesịrị ịrụ ọrụ.
Ọ bụrụ na ọ naghị arụ ọrụ, pịa njikọ “Nbanye” n’elu nke ibe ahụ ka ịbanye ọzọ wee pụta na ị ga - enwe ike ịmaliteghachi ebe ị hapụrụ. Nke a ga-eme ka peeji ahụ dị ọhụrụ.
Kedu otu m ga-esi kagbuo atumatu ego m (Primer ma ọ bụ Starter)?
Kagbu atụmatụ gị n'efu dị mfe. Nanị abanyela na SoNuker.com ma jiri ọrụ anyị ma ị gaghị anata ma ọ bụ zipu ndị ọ bụla debanyere aha ọhụrụ. Biko buru n'uche na ọwa ndị ị debanyere aha n'oge ejiri SoNuker.com ga-anọgide na akaụntụ gị iji bụrụ ndị ziri ezi na ndị ọrụ ndị ọzọ.
Atụmatụ Enterprise & Celebrity FAQ
Nkọwa nke atụmatụ ụlọ ọrụ na ndị ama ama (atụmatụ akwụ ụgwọ)
Atụmatụ Enterprise na Celebrity bụ ndị ama ama maka ọtụtụ ebumnuche.
Mgbe ịdebanyere aka na Enterprise or Plan Celebrity, ị na-anabata ndị na - atụ ụtụ 15 (Enterprise) ma ọ bụ ndị na - atụ ụtụ 60 (Celebrity) kwa ụbọchị, 100% na akpaghị aka. Usersfọdụ ndị ọrụ ga-wepu aha ọbụlagodi na ha, na-ahapụrụ gị ihe dịka 70% nke ndị debanyere aha mgbe ọ bụla rụchara ọrụ.
N'adịghị ka Atụmatụ efu, atụmatụ nke Enterprise na Celebrity bụ 100% akpaka, nke pụtara ozugbo ị debanyere aha ya, ị gaghị alaghachi SoNuker ọzọ. Anyị ga-enye gị ndị ntinye aha ọhụrụ kwa ụbọchị ka akaụntụ gị wee too n'usoro na-enweghị nchebe, na-enweghị nsogbu!
Ọnụ ahịa anyị na-akwụ ụgwọ maka atụmatụ Enterprise na Celebrity dị obere karịa ka ebe nrụọrụ weebụ niile ga-akwụ maka ndị debanyere aha "adịgboroja" na-anapụta ihe niile otu oge kama nke na-apụta, uto kwa ụbọchị ka anyị na-ebuga. Enterlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ na ndị ama ama na-ahụ na uto gị dị ka nke dị oke ala ma na-akwụ obere nke ọnụahịa ahụ!
Emegoro m atụmatụ nke Enterprise ma ọ bụ Celebrity, mana ndenye aha m adịghị arụ ọrụ.
Ọ bụrụ n’ịzụrụ atụmatụ nke Enterprise ma ọ bụ nke ama nke ọma, mana ndenye aha gị anaghị arụ ọrụ, biko kpọtụrụ anyị wee zitere anyị nseta ihuenyo nke azụmahịa ma ọ bụ nnata peeji yana URL gị, nke ga-enye anyị ozi niile anyị chọrọ iji nyere gị aka .
Emegoro m atụmatụ nke Enterprise & Celebrity na-erughị awa 24 gara aga ma enwetabeghị ndị debanyere aha ọ bụla.
Mgbe ịzụrụ atụmatụ Enterprise ma ọ bụ Celebrity, ọwa gị na-abanye na ntanetị n'ime awa ole na ole wee nọgide n'ime ya maka awa 24, nke bụ mmalite nke ụbọchị mbụ gị. N'ime oge elekere 24 ahụ, ị ​​ga-enweta oke nke ndị debanyere aha gị ụbọchị ahụ wee weghachi ọzọ n'echi ya. Buru n'uche, ndị debanyere aha anaghị abịa n'otu ntabi anya, mana a na-enyefe ha n'ime oge elekere 24, kwa ụbọchị.
Ndị debanyere aha m na - enweghị ndebanye aha. Kedu ihe na-eme?
Iji zaa ajụjụ a, e nwere ihe ole na ole ị ga-atụle. Nke a bụ ihe ị kwesịrị ịma:
Mgbe ị jiri ọrụ SoNuker, ọnụ ọgụgụ na-egosi na ihe dịka 70-80% nke ndị debanyere aha ị na-enweta kwa ụbọchị na-anọgide na akaụntụ gị. Site na nke a, anyị na-ebutekarị ihe mgbakwunye iji nyere aka kwụọ ụgwọ ahụ funahụrụ.
Ihe kpatara na ha anaghị anọgide na akaụntụ gị bụ n'ihi na ụfọdụ ndị anaghị eso iwu na wepu aha, mana amachibidoro na / ma ọ bụ taa ya ahụhụ maka nke a na YouTube na-ehichapụ ụfọdụ ndị debanyere aha na ya.
Ọzọkwa, algorithms ọhụrụ YouTube na-ehichapụkarị akụkụ nke ndị debanyere aha ha. Iji belata ego YouTube na-ewepụ, ịkwesịrị ilekwasị anya na iwepụta vidiyo ọhụrụ na ịbawanye echiche na mmasị na vidiyo gị. Y’oburu na inwere otutu ndi debanyere aha karia ihe nlere, odighi ezi uche maka ya gha eme, yabụ YouTube n’enwekwasi obi ihichapu ndi debanyere aha.
Ọdịmma nke ndị debanyere aha ị nwetara bụ nke kachasị dị maka ịzụta na andntanetị ma ọnụọgụ ego ị na-enweta kwa ọnwa karịrị nke ị nwere ike ịzụta site na weebụsaịtị ọ bụla maka ọnụahịa dị ala nke atụmatụ ịbanye ma ọ bụ Celebrity. Imirikiti ndị ahịa anyị nwere obi ụtọ maka ọrụ ahụ n'ihi na ọ na - enyere ọwa ha aka itolite maka ọnụ ahịa dị ọnụ ala.
Ọ ga-amasị m ịkagbu ọrụ m ma nweta nkwụghachi.
Ọ bụrụ na ịzụta atụmatụ ndenye aha ma ghara inwe obi ụtọ na ọrụ ahụ, biko kpọtụrụ anyị n'ime ụbọchị 3 nke ụbọchị ịkwụ ụgwọ ndenye aha gị, anyị ga-akwụghachi ma kagbuo ndenye aha gị. Ọ bụrụ n’ịkpọtụrụ anyị ihe karịrị ụbọchị 3 ka akwụchara ndenye aha gị wee rịọ maka nkwụghachi, ndị otu anyị ga-enyocha akaụntụ gị ma ọ bụrụ na ọ bụ njehie na njedebe anyị, anyị ga-akwụghachi ụgwọ gị zuru oke, ma ọ bụ nkwụghachi ego ego ole enyerela bọchị ndị anaghị eji n'ọnwa, ma ọ bụ nkwụghachi ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na ọ bụ ụbọchị asaa + 7 ka ị debanyerela ọrụ anyị.
Enwetara m nkwụghachi Stripe, mana ajụghị m ịkwụghachi ego m.
Mgbe ụfọdụ, ndị ọrụ na-etinye ọtụtụ iwu maka otu ọrụ ahụ na-enweghị amataghị ya. Anyị na-enyocha aka mgbe nke a mere ma n'ọtụtụ oge, o doro anyị anya na onye ọrụ ahụ ebughị n'obi ime nke a. Anyị ga-echezọ ma kwụghachi ikike (nga) iwu (nga) ngafe, mana dobe 1 n'ọrụ ka ị nwee ike ịga n'ihu na-anata ọrụ anyị. Nkwụghachi ego na-ewekarị ụbọchị 4-8 azụmahịa ka ịlaghachi na akaụntụ gị.
Kedu otu m ga-esi kagbu aha ndenye aha m?
Mgbe ịzụrụ ndenye aha ma ọ bụ ihe nnwere onwe, a ga-akwụ ụgwọ gị n'otu ụbọchị kwa ọnwa. Ọ bụrụ n’ oge ụfọdụ ịchọghị nnabata SoNuker gị, naanị zitere anyị ozi site na ibe Kpọtụrụ anyị, anyị ga-edobe akaụntụ gị ka ọ gwụchaa na ndenye aha ọnwa gị ugbu a.
Ọ bụrụ dịka ọmụmaatụ, ịdenye aha na 23 nke ọnwa, mana dee anyị gbasara ịkagbu akaụntụ gị na 10 nke ọnwa na-abịa, anyị ga-edobe akaụntụ gị iji kagbuo ụbọchị 13, na njedebe nke ndenye aha ọnwa gị ugbu a. Ọ bụrụ n’ịhọrọ ịkagbu ngwa ngwa, naanị mee ka anyị mara ma anyị nwere ike ịme gị nke ahụ.
Enweghị iwu ka ị nọrọ na ntinye aha maka oge ọ bụla, mana ị ga-ederịrị anyị akwụkwọ mgbe ịchọrọ ịkagbu. Anyị ga - ejikwa ya ma zitere gị ozi nkwenye.
Enwere m ike iji ọrụ akwụ ụgwọ maka naanị ọnwa 1?
Nwere ike ịgbalite atụmatụ ịkwụ ụgwọ site na iji nhọrọ ịkwụ ụgwọ anyị na kagbuo atụmatụ gị n'oge ọ bụla. Naanị zitere anyị ozi mgbe ị debanyere aha maka atụmatụ ịkwụ ụgwọ ma anyị ga-eme ka akaụntụ gị kwụsị mgbe otu ọnwa gachara, a gaghị akwụ gị ụgwọ ọzọ.
Enweghị kaadị akwụmụgwọ? Nsogbu adịghị! Were kaadị onyinye kwụọ ụgwọ!
Nwere ike ịgbalite atụmatụ akwụ ụgwọ site na iji nhọrọ ịkwụ ụgwọ onsite ma kagbuo atụmatụ gị n'oge ọ bụla. Nanị zitere anyị email mgbe ị debanyere aha maka ụgwọ akwụ ụgwọ anyị ga-edobe akaụntụ gị ịkwụsị mgbe oge otu ọnwa ahụ agaghị aga ụgwọ gị ọzọ.
Nwere ike ugbu a iji kaadị azụmaahịa zụta azụmahịa gị ma ọ bụ nke a ma ama.
Uru Iji Openbucks “Jiri kaadi Onyinye Gbaa Ego”
Kpebie: + Ọnọdụ 150,000 iji tinye ego gị na kaadị onyinye.
OBATARA EMI: Enweghi iweghachite, ojiji ma ọ bụ ụgwọ ọrụ! Ọ bụ naanị ego gị - na kaadị onyinye.
SAFE: Don'tkwesighi ịdebanye aha ma ọ bụ nye ozi / ego ụlọ akụ onwe gị iji kwụọ ụgwọ kaadị onyinye.
NIILE: Zụọ ahịa ma jiri kaadị onyinye dị na desktọpụ, mbadamba ma ọ bụ mkpanaka kwụọ ụgwọ.
Otú iji ya?
1. Zụta kaadị onyinye na CVS / Pharmacy, Dollar General ma ọ bụ oBucks: You nwere ike ịlele maka ebe mgbere ahịa kacha nso gị site na itinye koodu zip gị.
2. Banye na akaụntụ SoNuker gị wee họrọ “Enterprise” ma ọ bụ “Celebrity” na-ezube ịwelite ya.
3. Họrọ “Jiri kaadi onyinye” kwụọ ụgwọ ma tinye nkọwa kaadị onyinye gị mgbe kpaliri gị.
Ọ bụ ya! Ugbu a ị nwere ike ịnụ ụtọ nkwalite gị!